Embroidery 100% Polyester Beds nyebar HF29034 Set Quilt Coverlet, China Embroidery 100% Polyester Beds nyebar HF29034 Set Quilt Coverlet Manufacturer, mpamatsy, factory - Zhejiang Rancho Santa Fe home textile Co., Ltd
PREMIUM QUALITY FABRIC –Ny quilt dia vita amin'ny fitaovana microfiber avo lenta miaraka amina fikitihana malefaka sy lanja tonga lafatra. Enta-mavesatra ampy mba hitazonana ny mpanjifa mahazo aina, nefa ampy ho azy ireo tsy hiala amin'ny hatsembohana, tsara ampiasaina mandritra ny taona. Izy io dia natao ho kilasika sy marobe, volondavenona marevaka marevaka miaraka amina kofehy matevina geometrika marefo, mora mifanaraka amin'ny efitranonao misy ankehitriny.
DESIGN FABULOUS & Colour SOPHISTICATED & FUNCTIONS - Ny endrika mahafinaritra sy manintona dia manana loko marobe izay manome endrika be pitsiny ao amin'ny efitrano. Azonao ampiasaina ihany koa izy io mba hanaovana efitrano misimisy kokoa sy kanto kokoa, satria ilaina izany hanatsarana ny hakanton'ny efitrano ary heverina ho tsara indrindra ho an'ny mpivady vao. Izy io dia manana ny fijeriny somary ambany, monochromatic ary mitondra singa amin'ny antsipiriany sy fahaizany ao an-trano..Ny farafara fandriana dia maivana ampiasaina amin'ny toetr'andro mafana, fa mitazona ny azy ihany koa amin'ny alina mangatsiaka.
FAMONJENA maharitra sy mahitsy
Ny kalitao avo lenta sy ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Ity quilt set ity dia azo ahodina, ny lafiny roa dia azo ampiasaina tsirairay. Ary koa, izy io dia prewash ary preshunk ho maharitra sy Cozy farany ambony, manome antoka fa hitazona ny endrika imbetsaka. Ny vokatray dia misy kalitao avo lenta avo indrindra miaraka amin'ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa 100%. Fikarakarana mora sy sariaka amin'ny hoditra.